ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီ
၁၉၆၉ (Samsung Electric Industries)
၁၉၈၈ (Samsung Electronics)
(Vice chairman and CEO)
BK Yoon (President and CEO)
ဝမ် ၂၂၈.၆၉၂ တြီလီယံ (၂၀၁၃)
ဝမ် ၃၆.၇၈၅ တြီလီယံ (၂၀၁၃)
ဝမ် ၂၉.၈၂၁ တြီလီယံ (၂၀၁၃)
ဝမ် ၂၁၄.၀၇၅ တြီလီယံ (၂၀၁၃)
ဝမ် ၁၅၀.၀၁၆ တြီလီယံ (၂၀၁၃)
ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီ (Samsung Electronics Co., Ltd.) သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အခြေစိုက် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆောင်း အုပ်စု၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ဆမ်ဆောင်းအုပ်စု၏ ဝင်ငွေ ၇၀% ခန့်ကို ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအများဆုံး သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီ အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်းများ ဖြန့်ကျက်ထားကာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၇၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။
Apple၊ ဆိုနီ၊ HTC နှင့် နိုကီယာ အစရှိသော ကုမ္ပဏီများအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (lithium-ion ဘက်ထရီများ၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ flash memory နှင့် ဟတ်ဒစ်စ် ဒရိုက်ဗ်များ) ကို အဓိက ထုတ်လုပ်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။
များမကြာမီနှစ်များတွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လာကာ ဆမ်ဆောင်း ဂလက်ဆီ အမျိုးအစားဖုန်းများဖြင့် နာမည်ရလာပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ Samsung Electronics Co., Ltd Financial Statements။ Bloomberg။ 17 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။2May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Samsung Beats HP to Pole Position။ Financial Times။ 28 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How Samsung Became the World's No. 1 Smartphone Maker။ Business Week (28 March 2013)။ 2013-05-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple spent nearly $5.7 billion on Samsung parts in 2010, faces 'strong' response to its patent suit။ engadget.com (19 April 2011)။ 2013-05-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ HTC ditches Samsung components for other suppliers,ala Apple။ www.techradar.com (10 October 2012)။ 2013-05-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Samsung overtakes Apple as world's most profitable mobile phone maker | Technology. theguardian.com. Retrieved on 2013-12-08.
ဆမ်ဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီ၏ ဘလော့ခ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆမ်ဆောင်း_အီလက်ထရွန်းနစ်_ကုမ္ပဏီ&oldid=623591" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။